Mpiandry vavahady an'i Apple misakana ny malware vaovao hita: OSX / Keydnap | Avy amin'ny mac aho
Herinandro sarotra raha resaka malware amin'ny Macs ary io indray dia malware hafa no hita tamin'ity herinandro ity satria afaka mamaky ao amin'ny tranonkala AppleInsider. Amin'ity tranga ity dia tsy mitovy amin'ny malware hitantsika amin'ity herinandro ity Eleanor, satria toa hoe hamindra ny tenantsika isika mivantana avy amin'ny rakitra .zip voafintina izay misy rakitra .txt na sary .jpg izay misy ny kaody ratsy.
Amin'io lafiny io, ny anaran'ny fisie dia manana habaka eo am-piandohana, izay manokatra ny Mach-o azo tanterahina ao amin'ny terminal izay rehefa manokatra azy amin'ny tsindry roa sosona isika dia misokatra ary mikatona haingana dia haingana. Midika izany fa izany no izy ity malware vaovao X X ity izay tsy niaviany tsy fantatra anarana nantsoin'ny firm security ESET: OSX / Keydnap. OSX / Keydnap no malware Mac faharoa naseho tao anatin'ny herinandro.
Raha manana Gatekeeper voalamina sy miasa amin'ny Mac isika dia tsy hanana olana izany satria avy hatrany aorian'ny fanindriana ny rafitra fiarovana dia hovelomina ary hampitandrina antsika amin'ny hafatra fa fisie avy amin'ny mpamorona tsy fantatra izay manakana ny fandefasana rakitra maloto amin'ny Mac io. Raha toa ka tsy misy mpikatroka miasa Gatekeeper na voalamina tsara, ity malware ity dia handehandeha an-kalalahana ao amin'ny Mac misy vokatra ratsy aterak'izany ary manandrana mahazo fidirana amin'ny root amin'ny rafitra hahazoana fahazoan-dàlana na fampahalalana miafina momba ny mpampiasa
Ho an'ireo tsy mahazatra anao, ny Gatekeeper dia endri-javatra efa nisy saika misy hatrany ao amin'ny OS X ho toy ny fepetra fiarovana mba hisorohana ny kaody maloto tsy mandeha amin'ny rafitra tsy sonia izany ataon'ny mpamorona atokisana Amin'ny alàlan'ny taratasy fanamarinana, ny fanalana azy io dia mety hanimba ny mpampiasa indraindray, toy ny amin'ity tranga ity, fa tsy mila taitaitra ihany koa, satria mampiasa saina mahazatra ary raha tsy ianao dia iray amin'ireo izay misintona ny "zavatra rehetra hita" ny tambajotra, tsy tokony hanana olana ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Apple Gatekeeper dia manakana ny malware vaovao hita: OSX / Keydnap
carano1 dia hoy izy:
Fampahalalana tena tsara, saingy ahoana no hanamarinantsika fa manana ny mpiandry vavahady ny Mac antsika? Ary raha tsy hitantsika izy, ahoana no fomba hahazoantsika na hampihetsika azy?
Misaotra tamin'ny sainao
Mamaly an'i carano1